Maqaallada ku saabsan Austria
Shaqada iyo shaqada ee Austria
November 27, 2020 Antika Kumari Austria, shaqo
Ka shaqeynta Austria waxay noqon kartaa riyada ugu weyn ee qof walba haatan qabo, laakiin waxaa jira xaqiiqooyin ku saabsan suuqa shaqada. Waa inaad ogaataa taas kahor intaadan dhaqaaqin. Meelaha qaar, dalka waxaa soo food saartay shaqaale yaraan;
Codso Magangalyo gudaha Austria! Hubi Halkan!
August 26, 2020 Karuna Chandna Austria, qaxootiga
Haddii ay dhacdo in qof ka baqo inuu ku laabto waddankiisa. Mise gurigii ugu dambeeyay waa dal la’aan. Maxaa yeelay waxaad halis ugu jirtaa inaad wax dhibaato ah la kulanto. Waxaad ka heli kartaa difaac Austria. Tallaabada ugu horreysa ee lagu helo amniga ayaa ah
April 29, 2020 Antika Kumari Austria, safarka, fiisada
Si aad u booqato Austria ujeeddo kasta ha noqotee, ha ahaato ujeedo dalxiis ama waxbarasho ama shaqo. Waa inaad u baahan tahay fiiso taas haddii aadan ahayn muwaadin u dhashay Austria. Marka halkan waxaa ku yaal qodobbo si aad u codsan karto
Jaamacadaha ugu Fiican Austria
March 19, 2020 Shubham Sharma Austria, waxbarasho, safarka
Austria, waa wadan yar oo jooga Yurub laakiin heerka sare ee waxbarashada jaamacadeed ee Austria ayaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Jaamacado badan oo dalka ku yaal ayaa aad u qiimeeya adduunka. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Austria waa in waxbarashadu tahay
Daryeel caafimaad iyo isbitaalo wanaagsan iyo rugo caafimaad
February 2, 2020 Antika Kumari Austria, caafimaadka
Austria waxay bixisaa mid ka mid ah xarumaha daryeelka caafimaadka ee ugu fiican adduunka. Helitaanka adeegyada caafimaadna waxaa loo tixgeliyaa inay kufiicantahay shuruudaha caalamiga ah. Heerarka sare ee qiimaha ayaa kordha sannadihii la soo dhaafay. Iyo habka ay u tartamaan
February 1, 2020 Antika Kumari Austria, safarka
Austria waa mid kamid ah wadamada aaga euro-da ugu qanisan. Nidaamka bangiyada dalka sidoo kale waa lagu guuleystay, wuxuuna la kulmay heerarka adduunka. Laamaha bangiyada ayaa dhammaantood ku baahsan qaaradaha waaweyn. Waxa Austria ka jira 700 oo bangi oo ay ku jiraan bangiyada saamiyada wadaagga ah, bangiyada ganacsiga,
Wax ku bartay Austria.
January 31, 2020 Antika Kumari Austria, waxbarasho
Austria kaliya kuma taal bartamaha Yurub - laakiin waddanku wuxuu kaloo door muhiim ah ka ciyaaray taariikhda Yurub. Waxaa jira sababo badan oo wax looga barto Austria, oo ay ku jiraan tiro jaamacado ah oo ka mid ah kuwa
Nidaamka gaadiidka ee Austria.
January 30, 2020 Antika Kumari Austria, safarka
Awstaria waxay leedahay mid kamid ah nidaamka gaadiidka ee ugu horumarsan midawga yurub. Gaar ahaan caasimada midaysan Vienna waxay leedahay kaabayaal gaadiid dadweyne oo aad ufiican. Qodobbada qaar ee ku saabsan nidaamka Gaadiidka Vienna waxay ku shaqeysaa nidaamka daacadnimada. Tigid ma jiraan
Sare loo qiimeeyay 5 suuqyada iyo suuqyada Austria gudaheeda
Ma u baahan tahay cunnooyin, maro, qalabka guryaha? Austria waxay kuu haysaa suuqyo iyo suuqyo kala duwan. Halkan waxaa ku yaal qeexitaan kooban oo ku saabsan 5 ka mid ah kuwa ugu wanaagsan iyo suuqyada Austria. Sidoo kale ahaanshaha mid ka mid ah meelaha ugu fiican